Indlu enokubukwa ku-Ccs endaweni ephephile II
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-María Alejandra
Uhlobo lwe-loft olumnandi olunomnyango ozimele, endaweni yezintaba, eduze nezikhungo zebhizinisi zaseCaracas, ezisanda kulungiswa kabusha, nendawo yasekuseni, ikhishi, ideskithophu yomsebenzi, indawo yokugezela, izindawo eziphumulele eziluhlaza, ithala, i-Wi-Fi kanye nokupaka. Izilwane Ezifuywayo Zivunyelwe.
Indawo yothando, ethokomele futhi enethezekile endaweni ephephile yaseCaracas, enesimo sezulu sentaba. Ukuthi ithobela iphrothokholi ethuthukisiwe ye-Airbnb yokuhlanza nenhlanzeko futhi iyasebenza e-USA.
Siseduze ne-P&G, imizuzu eyi-10 ukusuka e-Las Mercedes ngemoto, sinezindawo zokuthenga ezi-4 eduze nendawo, futhi sinemizuzu emi-5 yokuhamba, izindawo zokudlela, amabhikawozi, izinto zokuhlanza ezomile, njll.
Ibungazwe ngu-María Alejandra
Itholakalela ukubhuka amahora angu-24 ngosuku